Ihe ị ga-ahụ na Florence na ụbọchị 3 | Akụkọ Njem
Florencia ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma obodo na Italy. O nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie n’ebe nile, ụlọ ụka ochie, ebe ndị mara mma, ezigbo ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, n'okporo ámá a na-agaghị echefu echefu ... Eziokwu bụ na Daysbọchị 3 na Florence Ha ezughi, mana ha zuru iji lelee ma chọọ ịlaghachi.
Njem mbụ m gara na Florence bụ ụbọchị 5, yabụ enwere m oge iji mee ihe ọ bụla ma mee ọtụtụ ihe. N’iche echiche n’oge ahụ, na-enyocha nleta m na ihe fọdụrụ na ntanetị, enwere m ike ịhapụ ndụmọdụ banyere ihe ị ga-ahụ na Florence n'ime ụbọchị atọ naanị.
Dịka anyị kwuru, enwere ebe ngosi ihe mgbe ochie, obí eze na ụlọ ụka ebe niile. Otu nwere ike ịkọwa nleta n'etiti akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị. Categorydị nke mbụ ga-agụnye ụlọ ochie na obí eze, chọọchị dị iche iche, n'okporo ámá na uwe mkpuchi nke Medici ... na nke abụọ, anyị kwesịrị ịgbakwunye ihe ngosi nka.
N'ihe banyere okpukperechi, okpukperechi na ije na okpukperechi na omenaala, ndi Iglesias ha bụ isi ihe na-adọrọ mmasị. N'ihi ya, m na nye ndụmọdụ zuo nke 72-awa tiketi ka lee Dome, Bell Tower, Crypt, Baptistery na ebe ngosi nka.
Taa tiketi ahụ na-efu euro 18 ma ọ bụrụ na ị ga-anọ awa 72 ọ bara uru n'ihi na ọ bụ nleta buru ibu ma ọ dị mfe iji kesaa ha ọtụtụ ụbọchị. N'ezie, maka ihe kachasị amasị, rịgoro n'elu Duomo, ị ga-akwụ ụma ma ọ bara uru. Ọtụtụ n'ime.
Gbago steepụ dị warara bụ nke kachasị mma na echiche sitere n’elu dị mma. Chọọchị n'onwe ya abụghị nnukwu nsogbu nye m, n'ihi ya, m na-eme ka ịrị elu nke dome pụta ìhè dị ka nke kachasị mma. Nzọụkwụ 463 ...
Anaghị m azụta kaadị ndị njem n'ihi na achọrọ m ịhọrọ nleta m dịka ọdịmma m siri dị. Ma enwere kaadị ndị njem, Kaadị Firenze, nke na-efu euro 85 na nke ọzọ 7 euro na-enye gị ohere iji ụgbọ njem ọha. Mgbe ị na-eme atụmatụ nleta ahụ ị ga-echeta usoro oge, ọ na-arụtụ aka:
ọnụ ụzọ nke Dome si elekere asatọ nke ụtụtụ, mana ọ na-emechi ụbọchị Sọnde.
ọnụ ụzọ Bell Tower si 8:30 am. Ọ bụghị igwe mbuli elu na usoro a na-agbakwunye ruo 414.
ọnụ ụzọ nke crypt ga-emepe na 10 nke ụtụtụ ma mechie na Sọnde na ụbọchị nke ihe omume okpukpe.
ebe a na-eme baptizim dị n'ihu Katidral ma mepee ebe elekere 11:15 ụtụtụ.
Ugbu a, ka anyị kwuo maka ya ngosi ihe mgbe ochie na Florence. Enwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie n'èzí, obodo ahụ bụ ebe ngosi ihe ikuku n'èzí, anyị enweghị ike ịgọnahụ ya, mana enwekwara ihe ngosi nka ọdịnala yana ọ bara uru ileta ụfọdụ.
Nwere ike ịhọrọ n'etiti Osisi Accademia, filọ osisi Uffizzi, Palazzo Strozzi, Palazzo Vecchio Museum, Palazzo Pitti na Vasari corridor, nke Palazzo Davanzati, Medici Chapels, Bargello Museum ma ọ bụ Opera del Duomo Museum.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ebe ngosi ihe mgbe ochie dị na Florence, enwere ọtụtụ ndị ọzọ, yabụ maka m ọ bụ ihe amamihe dị na ya ikpebi ihe masịrị anyị na site na nke ahụ ihe anyị chọrọ ịhụ na ihe na-abụghị, n'ihi na n'ime ụbọchị atọ ọ nweghị oge ida. Ọmụmaatụ, M na-amasị Middle Ages na ndị ọzọ karịa nnukwu obí eze obere ụlọ otú ahụ ka m kpebiri gaa leta Palazzo Davanzati, ụlọ ochie multi-akụkọ. Zọ mbata dị oke ọnụ ma na-enye gị ohere ịchọpụta ka ọtụtụ ndị ma ọ bụ ndị na-enweghị ego si bie ọtụtụ narị afọ gara aga: ime ụlọ ihi ụra, ime ụlọ ịwụ, kichin, ụlọ iri nri ...
M gara Palazzo Vecchio ya na ulo nkpu ya di elu, uzo ya n'etiti ochie na Renaissance na ndi mara mma Salone dei Cinquecento.
Hụ art Florence bụ nke kachasị mma, o doro anya, yabụ ị ga-agagharị na Uffizzi Gallery ma ọ bụ Osimiri Accademia, yana Devid. N'ebe ahụ ị ga-ahụ ọrụ Boticelli, Giotto, da Vinci, Michelangelo, Perugino, Giambologna ...
Ọ bụrụ na ihu igwe dị mma, m na-adụ ọdụ agbazite igwe kwụ otu ebe ma gaa maka ịgagharị. Nke ahụ na-enye gị ohere, na mgbakwunye na ịgagharị n'okporo ámá ochie, iru n'akụkụ nke ọzọ nke osimiri ahụ Obí eze. N'ebe a, ị nwere ike ịmata ọmarịcha ime ya, Royallọ Ndị Ezumike nke ọrụ Rubens, Rafael ma ọ bụ Titian na-arụ, ma ọ bụ ịgagharị n'ubi ya mara mma.
Emere m nke ikpeazụ a anaghị m akwa ụta. Na Ogige Boboli A gaghị echefu palazzo, nke nwere osisi, ihe ọkpụkpụ, isi iyi, ubi ndị a na-atụ egwu, echiche nke osimiri na obodo ahụ, agba mara mma ... niile na ubi ndị nwere ọdịdị site na XNUMXth na XNUMXth narị afọ.
na Icilọ Medici Ha dịkwa oke mma n'ihi na ha na-asọpụrụ ezinụlọ a mara mma nke meworo ọtụtụ obodo, otu a ka ọ dịkwa Bargello Museum nwere ọtụtụ ihe ọkpụkpụ. Emechaa, obodo ahụ nwere ụka ebe niile na a ihe ngosi nka kediegwu dị ntakịrị n'ihu, na Iblọ ihe nkiri Sibbert, n'ihi na m na-atụ aro ma ọ bụrụ na-amasị gị Middle Ages dị ka m ma ọ bụ na ị na-eso ụmụ. Muselọ ihe ngosi nka ọzọ masịrị m nke ukwuu bụ Museumlọ ihe nkiri Galileo, na ụwa na ngwa dị iche iche na-enyocha mbara igwe na ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ụbọchị atọ abụghị ogologo oge, ị ga-eji oge ehihie na abalị mee ihe. Mgbe ị laghachiri njem gị, ị ga-asa ahụ wee pụọ ọzọ, zụọ ahịa maka akpụkpọ anụ, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ nọrọ naanị ebe ọ bụla ma tụlee usoro obodo, ndị obodo ya, ndị njem ya.
You nwere ike ịzụta sanwichi emere n'ụlọ ma nọrọ ọdụ na-ekiri osimiri ahụ, na-ele anya Ponte Vecchio a ma ama, ị ga-anwa anwa gbagoro igwe kwụ otu ebe gaa Piazzale Michelangiolo, ebe mara mma Chọọchị San Miniato na ebe a na-eli ozu na echiche ya mara mma.
E nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ aroundụ gburugburu Ahịa Florence na otu ahia. M nwere ike ikwu ma ebe, karịsịa na-ewere a ije gburugburu Market, ịzụ achịcha na mgbe ahụ na-eri nri abalị na otu n'ime ụlọ oriri na ọ onụ onụ na square.
Daysbọchị 3 na Florence Ha ga-abụ obere ihe nye gị, mana nke ahụ dị mma n'ihi na ịlaghachi ebe anyị hụrụ n'anya bụ ihe kachasị mma maka onye njem ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Florencia » Ihe ị ga-ahụ na Florence n'ime ụbọchị atọ